Afọ 2019 isonye na Mwube Ebe Egwuregwu Olimpik
Ekwentị: +86 17749700640
Obodo Olimpik Oge Ochie nke Beijing bụ otu n'ime ebe egwuregwu Olimpik Oyi nke afọ 2022, yana ngụkọta mpaghara ya dị ihe dị ka square mita 333000. Ihe oru ngo a bụ ọrụ igodo mba dị na China. Hanbo ™ na -asọpụrụ ka ọ bụrụ onye na -ebubata ihe na onye na -ewu shingles.
Dika ihe chọrọ n'ụkpụrụ atọ nke atọ nke ụlọ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ kacha elu, a na-eme atụmatụ ime obodo China Yanqing Winter Olympic dị ka ụkpụrụ mba siri dị, na-eji shingle cedar na-eme enyi. N'akụkụ a, ụlọ cedar shingles nke China Yanqing Winter Olympic Village abụrụla ihe ngosi nke ebe mgbakọ Olympic.
N'ịzaghachi echiche nke nchedo gburugburu ebe obibi dị obere carbon, Yanqing Winter Olympic Games na-anabata ụlọ nke dị n'okpuru ala, ụdị "obodo nta ugwu" dị elu nke ụlọ ụlọ e ji osisi rụọ. A na -ewu ụlọ taịlị oghe ọkara mepere emepe dị ka ugwu ahụ si dị, ma na -eji ụlọ taịl osisi gosipụta àgwà ọdịbendị nke Beijing siheyuan, nke na -adịghị agbaji ụdị ugwu ma ọ bụ weghara ebe ugwu ahụ. A na -agbasasịkwa ụlọ ndị e ji osisi rụọ dị larịị ma kwụsie ike n'etiti ugwu na oke ọhịa n'ụdị. Nnukwu ụlọ taịl osisi nwere mpaghara ụlọ niile dị mita 118000 gbasasịrị n'ọkwa dị iche iche ma jikọta ya na ọwa asaa dị n'ime. Otu ụlọ na -ewu shingles cedar nke ọtụtụ ụlọ e ji osisi rụọ na -eme ka ọ pụta ìhè na mpaghara China china Yanqing Winter Olympic. Site n'iji njiri mara ọdịdị ụlọ ụlọ osisi, elu ụlọ cedar shingles na -egosipụta ọdịdị obodo site na iji ihe owuwu ụlọ, nke dabara na xiaohaituoshan n'ụzọ zuru oke.
Ndi mmadu na okike na ebikọ ọnụ. Ihe anyị na -ekiri na Egwuregwu Olimpik Olympic nke Beijing abụghị naanị asọmpi dị egwu ma dị egwu, kamakwa echiche nke "ịgbaso okike" kemgbe oge ochie na China, yana echiche dị mkpa maka "ịkwanyere okike ugwu" na -akwado n'oge a. Ụlọ osisi e wuru na ala ala bụ omenala ndị China “Nnukwu ụlọ ụlọ e ji osisi rụọ na China na -akwado mmepe obodo nke mmadụ na ọdịdị. N'ime mmemme eke na omenala, n'etiti oke ọhịa na ụlọ osisi, Egwuregwu Olimpik Winter ga -ahapụ ndị sonyere, ndị si mba ofesi na ndị ọrụ afọ ofufo nke ebe egwuregwu Olympic nke Olimpik ka ha nwee ahụmịhe dị egwu nke mmadụ na ọdịdị.
E guzobere Hanbo for maka afọ 17, sonyere na-ewu narị narị oru ngo, ndị otu ọrụ aka ọrụ, nwere ike idozi nsogbu dị iche iche na ọrụ ahụ ngwa ngwa. Maka convoy ọrụ ịzụta gị.
Oge ezipụ: Jun-21-2021